Iprofayile yeNkampani - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
I-PCBFuture izimisele ukubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nenkonzo yendibano ye-One-Stop ye-PCB kubo bonke abathengi behlabathi.I-PCBFuture isungulwe yi-SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD kwaye ibekwe kwiziko le-elektroniki lehlabathi laseShenzhen China.
I-KAISHENG PCB esekwe ngo-2009, yenye yamashishini okuvelisa ibhodi yesekethe ekhokelayo ehlabathini.Ukuze kubonelelwe ngeendleko ezisebenzayo kunye namava abalaseleyo kubathengi, i-KAISHENG ibonelela ngeenkonzo zendibano ye-PCB ye-turnkey equka uyilo lwe-PCB, ukwenziwa kwe-PCB, ukubonelelwa kwaMacandelo kunye nendibano yePCB kubathengi.I-PCBFuture luphawu oluphantsi lwe-KAISHENG lugxile kwinkonzo yendibano ye-PCB enye.
Ukususela ekusekweni kwayo, i-PCBFuture ibonelele ikakhulu iinkonzo zendibano ye-PCB ye-turnkey kubathengi baseYurophu, eMelika, eKhanada, eJapan, eKorea njl. ngexesha lokuziswa, ixabiso elikhuphisanayo kunye nenkonzo egqibeleleyo kuphela kwendlela yokuphumelela ukunyaniseka kwakho.Oku kukuvumela, wena mthengi obekekileyo, ukuba ugxile kwishishini lakho eliphambili uqinisekisiwe ukuba iimfuno zakho zikhuselekile kwaye ezandleni zengcali.
I-PCBFuture iyaqhubeka nokufunxa itekhnoloji ephezulu yasekhaya nakwamanye amazwe, kwaye yamkele izixhobo ze-SMT eziphambili ezivela eJapan naseJamani, ezifana noomatshini bokubekwa ngesantya esiphezulu, oomatshini bokushicilela abazenzekelayo kunye noomatshini bokuthengisa be-10 bobushushu bokutshintsha kwakhona.Iindibano zethu zePCBA kunye neworkshop engenathuli ziqinisekiswa yi-AOI kunye nobhaqo lweX-reyi.Sihambelana ngokupheleleyo ne-ISO9001: inkqubo yokulawula umgangatho we-2015, zonke iibhodi zeesekethe ziya kuba phantsi kovavanyo lombane ngaphambi kokulayishwa kwimigca yendibano ye-SMT, kwaye zonke ii-PCBA nazo zinokuvavanywa ukuba zifunwa ngaphambi kokunikezelwa.Uphuculo oluqhubekayo yeyethu lenkcubeko yenkampani, kwaye kufuneka ibe yeyakho, etyhala intsebenziswano yexesha elide kunye neqinile phakathi kwethu.
Sinebhongo kakhulu ngokuqhuba abathengi bethu kunye nathi empumelelweni ngeqela lethu lobuchwephesha abanamava atyebileyo, abanyanisekileyo kunye nesimo sengqondo esinenyameko.Abasebenzi bethu banokuncedisa abathengi ekuboneleleni ngezisombululo ezidibeneyo ukusuka ekuthengisweni kwangaphambili ukuya kwintengiso.Iingcali zethu zokubala iindleko nazo zinokusebenza nawe ukwenza ezona zisombululo zinexabiso eliphantsi kwinkqubo yakho yokuchwetheza.
Ubuchwephesha, iFlexible kunye neNtembeko ziintliziyo zendlela esihlangabezana ngayo neemfuno zabathengi bethu.Sikholelwa ngokuqinileyo ukuba uya kwaneliseka ngokupheleleyo ukuba usebenza nathi.Masiwonwabele umsebenzi kwaye sikhule kunye.